‘सूचना प्रविधिको हब बन्न सक्छ चितवन’ – Chitwan Post
‘सूचना प्रविधिको हब बन्न सक्छ चितवन’
प्रकाशित मिति: बुधबार, माघ २३, २०७५
कम्प्युटर एसोसिएसन नेपाल (क्यान) महासंघ चितवनले यही माघ २५ देखि २९ गतेसम्म चितवनको भरतपुरस्थित अन्तर्राष्ट्रिय औद्योगिक प्रदर्शनी केन्द्रमा ‘प्रभु पे क्यान इन्फोटेक चितवन–२०७५’ आयोजना गर्दैछ ।
सूचना र प्रविधिबारे जानकारी गराउने उद्देश्यले ‘चितवनको समृद्धि, सूचना प्रविधि’ भन्ने नारासहित मेला आयोजना गर्न लागिएको हो । विद्यार्थी र युवावर्गलाई केन्द्रमा राखेर मेला आयोजना गर्न लागेको क्यान महासंघ चितवनले जनाएको छ । चौँथोपटक आयोजना गर्न लागेको मेलाको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।
प्रभु पेको प्रायोजन तथा अक्सफोर्ड कलेजको सह–प्रायोजनमा हुन लागेको मेलाको पूर्वसन्ध्यामा चितवन पोष्ट दैनिकले क्यान महासंघ चितवनका अध्यक्ष भानु शर्मासँग कुराकानी गरेको छ । प्रस्तुत छ, उनीसँग गरिएको कुराकानी :
क्यान महासंघले आयोजना गर्न लागेको चौँथो क्यान इन्फोटेक मेलाको तयारी कस्तो छ ?
– हामी मेलाको अन्तिम तयारीमा पुगेका छाँै । धमाधम स्टल बुकिङ भइरहेको छ । विगतका मेलामा भन्दा यो मेलामा अझ उत्साह थपिएको छ ।
खासगरी कस्ता व्यक्तिका लागि केन्द्रित छ यो मेला ?
– सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित सबैका लागि मेला फलदायी हुनेछ भन्ने हाम्रो विश्वास हो । विशेषगरी, युवा तथा विद्यार्थी नै हाम्रो केन्द्रविन्दुमा छन् ।
सूचना प्रविधिमा चितवनलाई कसरी हेर्न सकिन्छ ?
– चितवनलाई अहिले नै सूचना र प्रविधिको हब भन्न त मिल्दैन, तैपनि सबै क्षेत्रमा सम्भावना बोकेको चितवनले सूचना र प्रविधिको क्षेत्रमा पनि उत्तिकै सम्भावना बोकेको हुनाले हामीले सूचना प्रविधिमा पनि हब बनाउने प्रयास गरिरहेका छौँ । किनकि, सूचना र प्रविधिका लागि काठमाडौँपछि चितवन नै विकासको गतिमा अघि बढिरहेको छ ।
चौँथो क्यान इन्फोटेकसम्म आइपुग्दा कस्तो महसुस गर्नुभयो ?
– पहिलोपटक क्यान इन्फोटेक आयोजना गर्दा अहिलेजस्तो सजिलो थिएन । त्यसैले, त्यतिबेला हामीले सानो लगानीबाट सुरू गरेका थियौँ । त्यतिबेला होटलमा कार्यक्रम गरेको त्यही क्यान महासंघले तेस्रो शृङ्खलाबाट औद्योगिक प्रदर्शनी केन्द्रमा गर्दै आएको छ । दोस्रो शृङ्खला आयोजना गर्दा पनि हामीले विभिन्न बाधा–अड्चन सहनुप¥यो । त्यसैले, पहिलो र दोस्रोको तुलनामा तेस्रोबाट हामीले थोरै भए पनि सक्षम भएको महसुस गरेका छौँ ।
यसपटकको मेलामा फरकचाहिँ के छ ?
विशेषः सूचना प्रविधिका नवीन रुपको प्रदर्शनी हुनेछ । सुरक्षासम्बन्धी उपकरण सेक्युरिटी सिस्टममा नयाँ प्रविधि, आइडिया हान्टलगायतका नयाँ प्रविधिको प्रदर्शनी हुनेछ । यसपटक हामीले पेपरलेस टिकटका लागि स्मार्ट गेटको प्रयोग गर्दैछौँ । यहीँकै प्राविधिकले उक्त गेट तयार गर्दै हुनुहुन्छ । सिसी क्यामेराको माध्यमबाटै हलभित्र कतिजना मान्छे भित्र छन् र कति बाहिरिए भन्ने देखाउने प्रविधिसमेत देख्न सकिनेछ । साथै, सिसी क्यामेराबाटै अँध्यारो ठाउँको भिडियो पनि रंगीन देखाइनेछ । त्यसबाहेक, सूचना प्रविधिसम्बन्धी नयाँ सचेतनाको विकास होस् र यो क्षेत्रमा काम गर्न चाहने युवाहरुलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले आइडिया हान्ट गर्दैछौँ । त्यसमा सहभागी भएकाहरुसँग प्रतिस्पर्धा गराएर विजेतालाई अवार्ड दिँदैछाँै । सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा काम गरेर पनि स्वदेशमै भविष्य बनाउन सकिन्छ भन्ने सन्देश दिन खोजेका हौँ । किनकि, पछिल्लो समय नेपाली युवामाझ धेरै पढेर पनि नेपालमा केही गर्न सकिँदैन भन्ने मनसाय बढ्दै गइरहेको छ । हामीले त्यसलाई चिर्न खोजेका हौँ ।
प्रायः मेलामहोत्सव नाफाकै लागि गरिन्छ । क्यानको उद्देश्यचाहिँ नाफा कमाउने हो कि होइन ?
– हाम्रो संस्था नाफामूलक संस्था होइन । सूचना प्रविधिको मेला आयोजना गरेर नाफा कमाउने हैसियत आजसम्म राखेका छैनौँ र भोलि पनि राख्ने छैनौँ । किनकि, हाम्रो चाहना भनेको सूचना प्रविधिसम्बन्धी ज्ञान बाँड्ने नै हो । त्यसैले, अहिलेसम्म ‘नन प्रफिटेवल अर्गनाइजेसन’का रुपमा काम गर्दै आएका छौँ । सूचना प्रविधिसम्बन्धी सूचना सम्प्रेषण र प्रवद्र्धन गर्ने नै हाम्रो उद्देश्य हो ।
नाफामूलक संस्था होइन भन्नुहुन्छ, फेरि टिकट शुल्क पनि राख्नुभएकै छ ?
– त्यसो होइन, मेला परिसरमा प्रवेश गरिसकेपछि आफ्नोपनको अनुभूति दिलाओस् भन्ने हेतुले हामीले न्यूनतम टिकट शुल्क राखेका छौँ । मान्छेलाई थोरै भए पनि पैसा तिरेपछि त्यसको सही सदुपयोग गर्नुपर्छ भन्ने भान हुन्छ । त्यसैले, हामीले टिकट शुल्क राखेका हौँ । त्यसमा पनि विद्यार्थीहरुलाई कलेज तथा विद्यालयको पत्र लिएर आउँछन् भने हामीले निःशुल्क प्रवेशको व्यवस्था गरेका छौँ ।
चौँथोपटक मेला आयोजना गर्दै हुनुहुन्छ । तर, अझै पनि सूचना प्रविधिसम्बन्धी दक्ष जनशक्ति कमै भेटिन्छन् नि ?
– हो, सूचना र प्रविधिको विकासले फड्को मारे पनि यसबारे पूर्ण ज्ञान प्राप्त जनशक्ति भने कमै छन् । त्यसैले, सूचना प्रविधिसम्बन्धी दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने पनि क्यान महासंघको मुख्य उद्देश्यभित्रै पर्छ । सूचना प्रविधिसम्बन्धी दक्ष जनशक्तिको अभाव पूर्ति हुन नसक्दा सामाजिक सञ्जालहरुमा विभिन्न खालका नकारात्मक गतिविधि हुने क्रम पनि बढ्दै गएका छन् । त्यस्ता क्रियाकलापबाट जोगिनका लागि हामीले माइक्रोसफ्टको सहयोगमा कम्प्युटर शिक्षकलाई तालिम दिँदैछौँ ।
अन्य मेलामहोत्सवमा बढी नै तामझाम हुने गर्छ । तर, क्यानले यति ठूलो मेला गर्दा पनि त्यस्तो तामझाम हुँदैन नि ?
– हामीले अनावश्यक भीड चाहेका होइनौँ । यहाँ जो आए पनि सिक्न र बुझ्न आउने हो । त्यसैले, सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित संस्था, व्यक्ति तथा संगठनका लागि उपयोगी हुन्छ । जति आउनुहुन्छ सबैले सिकेरै जानुहुन्छ भन्ने हाम्रो विश्वास हो ।
कति दर्शक भिœयाउने लक्ष्य छ ?
– करिब डेढ लाख दर्शकले अवलोकन गर्नुहुनेछ भन्ने हाम्रो अनुमान हो । मेला सफल बनाउनका लागि हामीले भरतपुर महानगरपालिकाको वडा नं १०, ११, १२ र ३ का सबै टोल विकास संस्थासँग पनि मेलाको अवलोकन गरिदिनुहुन आग्रह गरेका छौँ ।
अन्त्यमा, यो मेला तपाईं हाम्रै मेला हो । त्यसैले, सबैले समय मिलाएर एकपटक मेलाको अवलोकन गरी सहयोग गरिदिनुहुन सबैमा अनुरोध गर्दछु ।
‘सूचना प्रविधिको प्रदर्शनी नै क्यान इन्फोटेक’
–दिलीपकुमार तामाङ (संयोजक) आर्थिक व्यवस्थापन समिति, ‘प्रभु पे क्या इन्फोटेक–२०७५’
क्यान महासंघका लागि ‘प्रभु पे क्यान इन्फोटेक–२०७५’ एउटा ठूलो महोत्सव हो । हामीले यसबाट करिब ७५ लाख रूपैयाँ खर्च लाग्ने अनुमान गरेका छौँ । नाफामूलक कार्यक्रम नभए पनि मेलाबाट करिब चारदेखि पाँच लाखसम्म आम्दानी हुने लक्ष्य लिइएको छ । तयारीको अन्तिम चरणसम्म आइपुग्दा सबैको साथ र सहयोग पाइरहेका छौँ । यो मेलामा विशेषगरी शैक्षिक परामर्श केन्द्र, इन्टरनेटसहित नयाँ–नयाँ प्रविधिसम्बन्धी स्टल रहनेछन् । २१औँ शताब्दीमा प्रविधिबिना नै पनि कार्य सम्भव छैन । सूचना प्रविधिकै सही सदुपयोगबाट मान्छेको जीवनस्तर उकास्न सफल भएका छन् । त्यसैको प्रदर्शनी नै क्यान इन्फोटेक मेला हो । यसमा विद्यार्थीले तयार पारेका नयाँ आविष्कारहरुको स्टलसमेत रहनेछन् । (कुराकानीमा आधारित)
‘विद्यार्थी र युवाका लागि मह¤वपूर्ण’
–टेकलाल भुसाल (संयोजक) सचिवालय व्यवस्थापन समिति ‘प्रभु पे क्यान इन्फोटेक–२०७५’
स्टल बुकिङको काम करिब अन्तिम चरणमा पुगिसकेको छ । सोहीअनुसार प्रचारप्रसारलाई पनि तीव्र पारेका छौँ । स्वयम् सेवकमार्फत जिल्लाका विभिन्न स्कुल तथा क्याम्पसहरुमा पत्राचार गरिरहेका छौँ । विद्यार्थी र युवा लक्षित कार्यक्रम भएकोले सकभर विद्यालय तथा क्याम्पसका शिक्षक तथा विद्यार्थीलाई अनिवार्य सहभागी गराउने योजना छ । आईटीसम्बन्धी पढाइ हुने सबै कलेजका शिक्षक तथा विद्यार्थीलाई सहभागी गराउने हो । कम्तीमा पनि ८० जनाभन्दा धेरै कम्प्युटरसम्बन्धी शिक्षकहरु सहभागी हुने अनुमान छ । यसपटक अनलाइन विज्ञापनलाई विशेष मह¤व दिएका छौँ । त्यसैले, पहिलेको भन्दा केही न केही फरक छ । जसले आईटी क्षेत्रमै भविष्य खोजिरहेका छन्, त्यस्ता युवाको लागि फाइदाजनक छ । पहिले पहिले सामान बेच्नका लागिमात्रै मेला हुन्थ्यो । तर, अहिले सामान बेच्नेभन्दा पनि जानकारी दिने हो । (कुराकानीमा आधारित)